🥇 Ukubika ngomthumeli
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 734
Ividiyo ye-accounting ye-dispatcher
Oda ukubalwa kwemali komthumeli
Ukuphathwa ngempumelelo kokuthuthwa kwempahla kuxhomeke ekusebenzeni kahle kokuthunyelwa komsebenzi, ukuvuselelwa okufika ngesikhathi futhi okusheshayo kolwazi olusetshenzisiwe kanye nenhlangano ecacile yokuxhumana kwezokuthutha. Ukuxazulula le nkinga, kuyadingeka ukusebenzisa ubuchwepheshe besoftware ehambisanayo. Uhlelo lwe-accounting lwabathumeli bezimpahla, olwenziwe ochwepheshe be-USU-Soft, lunikeza isethi ephelele yamathuluzi okuqapha izimpahla kanye nesimo sobuchwepheshe bezokuthutha, futhi ikuvumela ukuthi uhlele zonke izinqubo zokusebenza nezokukhiqiza zenkampani ye-logistics. Uhlelo lwe-USU-Soft accounting lwe-dispatchers lunamandla onke okwenza umsebenzi wakho usebenze futhi usebenze kahle ngangokunokwenzeka ngoba inemisebenzi eminingi ewusizo: ukuzenzakalela kokuhamba komsebenzi, izindawo zokuhlala nokusebenza, izinsizakalo zamahhala zokuxhumana kwangaphakathi nangaphandle, isikhombimsebenzisi esibonakalayo nesakhiwo esilula. Ngasikhathi sinye, uhlelo lokubalwa kwamakhompiyutha olwenziwe yithi luhlukaniswa nokusebenza kwalo okuhlukahlukene. Kuyo ungaphatha izimpahla kanye nezinqolobane zokugcina impahla, uhlele ezokuthutha futhi wakhe uhlelo lokukhiqiza lwezimoto, ulawule ukusetshenziswa kwezinsizakusebenza zikaphethiloli namandla, usebenze ekukhuthazeni izinsizakalo emakethe futhi uhehe amakhasimende ngenkuthalo, wenze ukuhlolwa kwamanani ezisebenzi nokunye okuningi. Isoftware yethu yokuthumela izimpahla yezokuthutha imithwalo inezilungiselelo eziguquguqukayo, ukuze ukumiswa kwesoftware ye-accounting kuzocubungula izici nezidingo zenkampani ngayinye.
Ukusebenza kuhlelo lwe-USU-Soft dispatchers 'accounting, abathumeli babheka ukuqhubeka kwesigaba ngasinye sokuthuthwa kwempahla, bhala izigaba ezidlulile, qhathanisa imayela langempela futhi elihleliwe lolo suku, ukubala i-mileage esele bese ubikezela isikhathi esilinganisiwe sokufika ukuphela. Ukuqinisekisa ukuthi konke ukuthunyelwa kulethwa ngesikhathi, abasebenzi bakho bayakwazi ukushintsha imizila yokuhamba ngesikhathi sangempela, bahlanganise ukuthunyelwa, futhi basebenze ekwenzeni imizila. Futhi lokhu kuyingxenye yamathuba ahlinzekwa uhlelo lwethu lokulawula ukubalwa kwezimali kwabathumeli bethu. Umthumeli wezokuthutha uzofaka imininingwane yezindleko ezenziwe ngenkathi zilethwa ukuze kulawulwe ukwamukelwa kwamaphepha avela kubashayeli abaqinisekisa izindleko. Ngenxa yalokhu, ungabheka ukulungiswa kwezindleko nganoma yisiphi isikhathi. Ngaphezu kwalokho, abathumeli bayakwazi ukulawula isimo sobuchwepheshe bezimoto ezisetshenzisiwe futhi bagcine imininingwane eningiliziwe yemikhumbi yonke yezimoto.
Isakhiwo se-laconic sohlelo lwe-dispatchers 'lokulawulwa kwe-accounting sinezigaba ezintathu eziyinhloko, ngasinye sazo senza imisebenzi ethile. Isigaba se-Directory yisizinda semininingwane jikelele esakhiwa abasebenzisi. Amakhathalogi, angavuselelwa uma kunesidingo, aqukethe izigaba ezahlukahlukene zolwazi: izinhlobo zezinsizakalo zokuhanjiswa kwempahla, imizila eyakhiwe nezindiza, ukuqanjwa kwamagama ezimpahla nezinto zokwakha, amagatsha nezindawo zokugcina izimpahla, izinto zokwenza ukubalwa kwezimali nezindleko, amatafula wemali nebhange ama-akhawunti. Isigaba samaModyuli siyadingeka ekuhleleni izindawo ezahlukahlukene zomsebenzi. Kuyo, abasebenzi babhalisa ama-oda ezokuthutha, babale izindleko ezidingekayo ukuze zisetshenziswe futhi banqume intengo yezinsizakalo zokuhamba, bathuthukise umzila ofanele kakhulu futhi babeke indiza efanele. Ukulawulwa kwezokuthutha kwabathumeli, ukulandelwa kokuhamba kwezimali, ukugcina amarekhodi okugcina izimpahla, nokwenza amasu wokumaketha nakho kuyenziwa lapha. Abasebenzi bakho basebenzisa amathuluzi anjengofanele wokuthengisa kanye nokuhlaziywa kokusebenza kwendlela yokuphromotha abathumeli bethu; Uhlelo lokubalwa kwekhwalithi luhlinzeka ngomthumeli wezimpahla. Izinsizakalo zocingo neze-imeyili ziyatholakala mahhala. Isigaba Semibiko sikuvumela ukulanda imibiko yezezimali neyokuphatha ukuze wenze ukuhlaziywa okuphelele kwezinkomba zenzuzo, inzuzo, imali engenayo kanye nezindleko.
Ukuguquguquka kwezinguquko kanye nokwakheka kwemiphumela yezezimali kuzokwethulwa kumatafula abukwayo, kumagrafu nakwimidwebo, ngenkathi ukukhiqiza imibiko ohlelweni lokulawula ukubalwa kwezimali kuzothatha isikhathi esincane. Ngakho-ke, isoftware inazo zonke izici namathuba abanzi wokusebenzisa kahle izinqubo okufanele zibe nazo uhlelo lokubalwa kwabathumeli olusebenzayo. Ungalanda inguqulo yedemo yamahhala yesoftware kuleli khasi ngemuva kwencazelo yomkhiqizo. Ukuphathwa kwezokuthutha kuzosebenza kangcono ngenxa yokwakhiwa kwesheduli yokulethwa okuseduzane ngokomongo wamakhasimende kanye nokulungiswa kusengaphambili kwezokuthutha ukwenza ama-oda. Ochwepheshe benkampani yakho bazofaka imininingwane mayelana namapuleti ezilayisensi, izinhlobo nezinye izici zezimoto, abanikazi bazo kanye nemibhalo ehlobene nayo. Uhlelo lokulawulwa kokuthunyelwa kwezithuthi lwazisa abasebenzi ababhekele izidingo zabo mayelana nesidingo sokuqhuba ukunakekelwa kwemoto ethile. Ngemuva kokulethwa kwezimpahla nempahla, zonke izinkokhelo ezisezingeni eliphakeme ezitholwe kumakhasimende ziyarekhodwa ku-database ye-oda ukuze kulawulwe ngesikhathi esifanele imibuzo evelayo. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokucacile kolwazi kohlelo lokubalwa kwezimali, uzokwazi ukufinyelela ekuqapheleni ukuhamba kwemali nokusebenza kwezimali, ngenkathi idatha yezimali yawo wonke amagatsha izohlanganiswa kusisetshenziswa esisodwa.
Ukulawulwa kwenani lokusetshenziswa kwamafutha kanye nezinto zokuthambisa kwenziwa ngokubhaliswa nokukhishwa kwamakhadi kaphethiloli kubashayeli, okunqunyelwe imingcele yokusebenzisa uphethiloli. Futhi, abathumeli benza ama-waybill, achaza umzila nohlu lwezindleko. Uhlelo lokuvunyelwa kwe-oda le-elektroniki lwazisa abasebenzisi ngokufika kwemisebenzi emisha futhi likuvumela ukuthi ubeke imibono bese ubheka ukuthi singakanani isikhathi esichithwe ekuqedeni kwabo. Kumodyuli yeCRM (Ukuphathwa Kobudlelwano Namakhasimende), abaphathi bamakhasimende bayakwazi ukusebenzisa amathuluzi amahhala njengofanela wokuthengisa, ukuguqula nokubhaliswa kwezizathu zokwenqatshwa kuma-oda. Ku-database yokubuka okubonakalayo, ukulethwa ngakunye kunesimo saso esithile nombala, okwenza kube lula kakhulu ukuthumela umsebenzi, ukulandelela isigaba sokulethwa nokwazisa amakhasimende. Ukuhlolwa kokusebenza kwemikhankaso yokukhangisa esetshenzisiwe kukuvumela ukuthi unqume izindlela zokwenyusa ezilungele kakhulu ukuheha amakhasimende amasha. Ngenxa yokuhlaziywa kwamandla okuthenga, ungakha ukunikezwa kwamanani wokuncintisana, wakhe uhlu lwamanani nezinhlu zamasevisi bese uwathumela nge-imeyili.
Ukusebenza kohlaziyo lohlelo lokubalwa kwemali kusiza ukuqapha isimo sezimali samanje senkampani futhi kunqume izindawo ezinenzuzo enkulu yokuqhubekisela phambili ibhizinisi. Ukuhlolwa kokutholakala kwezindleko kuveza izindleko ezingenangqondo, kukhulise izindleko futhi kukhuphule inzuzo yemisebenzi. Imibhalo edingekayo yokuthumela izokwenziwa ngokushesha futhi iphrintwe ngendlela ejwayelekile.